2013 – Year – Burmese Subtitle 5.8
Percy Jackson: Sea of Monsters (2013) ရှေး ဂရိဒဏ္ဍာရီထဲက နတ်ဘုရားတွေ… နတ်ဘုရားမတွေအကြောင်း …သူတို့ရဲ့စွမ်းအားတွေ… နတ်ဘုရားတွေနဲ့ လူသားတွေချစ်ကြိုက်မိရာမှမွေးဖွားလာတဲ့ သွေးနှောနတ်ဘုရားတွေ…ဂရိဒဏ္ဍာရီထဲက သတ္တဝါဆန်းတွေ…ဒါတွေဟာ ရုပ်ရှင်ချစ် ပရိသတ်တွေအတွက် အဆန်းတကြယ် ဖြစ်မနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေ အနည်းနဲ့အများ ရင်းနှီးပြီးသား အကြောင်းအရာတွေလို့ယူဆမိတယ်… ဘာလို့ဆို နတ်ဘုရားတွေပေါ်အခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ပေါင်းလည်း နည်းမှမနည်းဘဲကိုး… အဲ့ဒီ နည်းမှမနည်းတဲ့ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာထဲမှ…ဒီနေ့အတွက် ရေနတ်ဘုရားရဲ့သားတော် ဖြစ်တဲ့ ပါစီဂျက်ဆန်ရဲ့ စွန့်စားခန်း ဇာတ်လမ်းလေး၂ပုဒ် ကို တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်… ဒီပါစီဂျက်ဆန် ကိုငယ်ငယ်က သိပ်နှစ်သက်ခဲ့ပြီး ခုတစ်ဖန်ပြန်လည်ကြည့်ရှုချင်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်လည်း old but gold ဘာညာပေါ့နော်… နောက်ဇာတ်လမ်းအဆက်ဖြစ်တဲ့ The Sea of Monsterကတော့ တော်တော်လေးကိုလန်းတဲ့အပိုင်းတွေပါတာ ဝန်ခံရမှာပါ… ဇာတ်လမ်းအစမှာတော့ သွေးနှောနတ်ဘုရားတွေရဲ့ စခန်းကို ကာကွယ်ထားတဲ့ သစ်ပင် တံတိုင်းကြီး ဖြစ်ပေါ်လာပုံတွေ… ပထမဇာတ်လမ်းမယ် အိုလန်ပတ်စ် ကိုကယ်တင်လိုက်ပြီးနောက် ဆက်ပြီးပုံမလာနိုင်တော့တဲ့ ပါစီတစ်ယောက် စခန်းမှာအနှိမ်ခံရပုံတွေ… သူ့ရဲ့ ညီတစ်ယောက်ရောက်လာပုံတွေ ပါစီ့အတွက် ဟောပြောထားတဲ့ရှေ့ဟောဗျာဒိတ်တွေကြောင့် ခေါင်းစားရပုံတွေ ကြည့်ရှုရမှာပါ … လိုရင်းကတော့ အကာအကွယ်သစ်ပင်ကြီးရုတ်တရက် အဆိပ်ခတ်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက် ...
IMDB: 5.8/10 102,433 votes
Police Story: Lockdown (2013) Police Story : LockDown ( 2013 ) -------------------------------------- 2013 ခုနှစ်က ထွက်ထားတဲ့ Police Storyဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းသားကြီးဂျက်ကီချန်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး Imdb 6.1 ရရှိထားပါတယ်အက်ရှင်ကြိုက်ပရိတ်သတ်တို့အတွက် နှစ်သက်မယ့်ကားကောင်းပါပဲဇာတ်လမ်းအညွှန်းလေးကတော့သမီးဖြစ်သူနဲ့တွေ့ဆုံရန်ဘားကိုရောက်လာတဲ့ ရဲအရာရှိ ကျုံးဝမ်တစ်ယောက်ဘားကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲ..မမျှော်လင့်ပဲပြန်ပေးဆွဲခံလိုက်ရတယ်.. တခြားသောပြန်ပေးဆွဲခံရတဲ့သူတွေလည်းရှိပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်..ဒီအမှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘာတွေရှိမှာလဲကျုံးဝမ်နဲ့ဘယ်လိုတွေပတ်သတ်နေတာလဲဆိုတာတော့ Spoil မဖြစ် အောင် အညွှန်းကိုလျော့လိုက်ရပါတယ်ဂျက်ကီချမ်းကားဖြစ်တဲ့အညီ ထွေထွေထူးထူးညွှန်းစရာမလိုတဲ့ အက်ရှင် ဒရာမာ ဇာတ်ကားကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်
IMDB: 6.1/10 8,104 votes
The Lone Ranger (2013) The Lone Ranger (2013) ================= Pirates of the Caribbean ဇာတ်ကား ဖန်တီးရှင် ထုတ်လုပ်သူ Jerry Bruckheimer နဲ့ ဒါရိုက်တာ Gore Verbinski တို့ရဲ့ လက်ရာ ဖြစ်ပြီး Tonto အဖြစ် မင်းသား Johnny Depp ၊ Lone Ranger ခေါ် John Reid အဖြစ် Armie Hammer ၊ Latham Cole အဖြစ် Tom Wilkinson Butch Cavendish အဖြစ် William Fichtner ၊ Red Harrington အဖြစ် Helena Bonham Carter ၊ Dan Reid အဖြစ် James Badge Dale နဲ့ Rebecca အဖြစ် Ruth Wilson ...
IMDB: 6.4/10 208,299 votes
Frozen (2013) Arendelle နိုင်ငံက မင်းသမီးငယ်လေး Anna ဟာ သူ့အစ်မ Elsa ကို ညဘက်ကစားဖို့ သွားနှိုးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မင်းသမီး Elsa မှာ ထူးဆန်းတဲ့ စွမ်းအားတစ်ခု ရှိနေပါတယ်။ နှင်းတွေ၊ ရေခဲတွေကို လိုသလိုဖန်တီးနိုင်တဲ့ Elsa ဟာ သူ့ညီမလေးကို မတော်တဆ ရိုက်မိသွားပါတယ်။ Elsa မှာ ရှိနေတဲ့ စွမ်းအားတွေအကြောင်း ဘယ်သူမှမသိအောင် မိဘတွေက ဖုံးကွယ်ထားပြီး Elsa ရဲ့ စွမ်းအားတွေအကြောင်း Anna ရဲ့ မှတ်ဉာဏ်ထဲက ပျောက်သွားအောင် Troll ခေါင်းဆောင်ကြီး Grand Pabbie ထံ သွားပြီး အကူအညီတောင်းရပါတယ်။ အကယ်၍ Elsa သာ Anna ရဲ့ နှလုံးသားနေရာကို ရိုက်မိသွားရင် နှလုံးခဲပြီး သေသွားနိုင်တယ်လို့ Grand Pabbie က သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကြောင့် သူတို့ရဲ့ ...
IMDB: 7.5/10 515,218 votes
R.I.P.D. (2013) R.I.P.D (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး Blu-Ray ============================ ဒီဇတ်ကားလေးမှာတော့ မင်းသား Ray ဟာသူ ရဲ့လက်တွဲဖော်နဲ့စစ်ဆင်ရေးလုပ်ရင်းဆုံးပါးသွားခဲ့တာ ပေါ။့ သူသေဆုံးချိန်မှာသူ့ကို R.I.P.D လို့ခေါ်တဲ့ အဖွဲ့ကအမှုတစ်ခုကိုလိုက်ဖို့ပြန်လည်ဆင့်ခေါ်ခဲ့တာပေါ့။ R.I.P.D ရဲ့အမှုတွေဟာငရဲပြည်ကနေလွတ်လာတဲ့ လူအဆောင်ယောင်တွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးဖို့်ပါပဲ။ကဲ Ray တစ်ယောက်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာ ကိုတော့ဆက်လက်ကြည့်ရူပါလို့ညွန်းဆိုပါတယ်။ Movie Review by FOF Myanmar
IMDB: 5.6/10 108,858 votes
47 Ronin (2013) 47 Ronin (2013) 47 Ronin ဟာ ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်က ရိုးရှင်းပေမယ့် နောက်ခံ အကြောင်းအရာတွေက စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာပါ .. ဒီဇာတ်လမ်းဟာ ၁၈ ရာစုဂျပန်ပြည်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒဏ္ဍာရီပမာအဖြစ်အပျက် ကို ရုပ်ရှင်အဖြစ် ပြန်လည်အသက်သွင်းထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် .. . ဆာမူရိုင်း ဆိုတာ အရှင်သခင်တစ်ဦး လက်အောက်က အမှုထမ်းဓားသမား တွေကို ခေါ်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ် .. အဲ့လို အရှင်သခင် မရှိတော့တဲ့ ဆာမူရိုင်းဓားသမားတွေကို ရိုနင်(Ronin-将軍) လို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ် .. ဒီနေရာမှာ ဆာမူရိုင်းတွေရဲ့ စံချိန်တင်လောက်စရာ သစ္စာတရား နဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာက .. တကယ်လို့ အဲ့ဒီအရှင်သခင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရင် အဲ့ဒီအရှင်သခင်လက်အောက်က ဆာမူရိုင်း တွေဟာ တခြားအရှင်သခင်ဆီ မပြောင်းလဲတတ်ကြဘဲ ရိုနင် အဖြစ်ခံယူလိုက်ကြပါတယ် .. . ဒါက ဇာတ်လမ်းရဲ့ နောက်ခံ အကြောင်းအရာတချို့ပါ .. . ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ကတော့ ပြောခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်း တကယ်ရိုးရှင်းပါတယ် ..။ . အရှင်သခင်ဖြစ်သူ ရဲ့ မတော်မတရား လုပ်ကြံခံရပြီး သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်ကို လက်စားချေဖို့ ...
IMDB: 6.3/10 135,049 votes
Thor: The Dark World (2013) Asgard ဘုရင် တွင် သားတော် ၂ ပါး Thor နှင့် Loki ရှိသည်။ Thor သည် စစ်မှုရေးရာတွင် ကျွမ်းကျင်သော်လည်း အင်မတန် တိုက်ခိုက်ချင်စိတ်များကာ မရင့်ကျက်သေးသည့် စစ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ Thor ကို တစ်ရက် ဘုရင်ကြီး အိုဒင် က ထီးနန်းလွှဲပေးမည့် နေ့ရက်ဖြစ်သည်။ သူတို့ လက်နက်တိုက်မှ Giant Frost မှ အရေးကြီးဆုံး လက်နက် ကို Giant Frost ထံမှ ဘက်တော်သားများက ခိုးယူဖို့ကြံစည်သည်။ ဘုရင်ကြီးသိသွားကာ အစောင့်ကို တိုက်ခိုက်လိုက်သည်။ ထိုသို့လာရောက်ကျူးကျော်မှုကို Thor က လက်မခံသော်လည်း ဘုရင်ကြီးက ဘာသိဘာသာနေဖို့ပြောလိုက်သည်။ Thor မှ မခံချင်ပဲ သူ့ ညီငယ် ...
IMDB: 7.0/10 501,868 votes
Iron Man3(2013) Iron Man3(2013) သည် IMDb 7.2 Rotten Tomatoes 79% Google User 88 % ဒါရိုက်တာ Shane Black က ရိုက်ကူးထား၍ Drew Pearce, Shane Black တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးထားကာ Robert Downey Jr., Guy Pearce, Gwyneth Paltrow တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Sci-Fi ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. Tony Stark ရဲ့ ကမ္ဘာကို Mandarin လို့ ခေါ်တဲ့ အကြမ်းဖက်သမားကြီးက ခြိမ်းခြောက်ဖျက်ဆီးရန်ကြိုးစားလာသောအခါ ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီး ရင်ဆိုင်ကြပုံကို Iron Man အပိုင်း(၃)မှာ ဆက်လက်ခံစားကြည့်ရှုကြပါခင်ဗျာ… Reviewed By Win Kyaw Thu File Size ...
IMDB: 7.2/10 652,694 votes
The Hunger Games: Catching Fire (2013) ယခုကားနဲ့ ပထမကားနဲ့ ကဇာတ်လမ်းအရပြောရရင် ဘာမှသိပ်မထူးခြားသလိုပါပဲ။ ပထမကားမှာတုန်းက Katniss က Hunger Games ထဲကို သူမရဲ့ ညီမအတွက် Volunteer လုပ်ပြီးဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ယခုကားမှာတော့ သူမအတွက်ရွေးချယ်စရာမရှိခဲ့ပါဘူး။ တော်လှန်ပုန်ကန်သုတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်အားမြင့်လာစေနိုင်သော သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့ သူမကိုပျက်ဆီးရန် President Coriolanus Snow (Donald Sutherland) သည် Gamemaker အသစ်ဖြစ်သူ Plutarch Heavensbee (Philip Seymour Hoffman) ဆိုသူရဲ့ အကြံဥာဏ်ဖြင့် Hunger Games 75th နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အား 25 နှစ်အတွင်း အောင်နိုင်ခဲ့သူများအားလုံး ထပ်မံယှဉ်ပြိုင်ရမည့် ပွဲတစ်ပွဲကို စီမံလေသည်။ ရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိသော Katniss သည်ယခင် Games ထက်ပိုပြီး အနွရယ်များသော ယခု Hunger Games အသစ်အားထပ်မံဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သောအခါ... ကျွန်တော် ပထမကားကိုသေချာမကြည့်ခဲ့လို့ လားတော့မသိဘူး၊ ဒီကားမှာ အဓိကဇာတ်ကောင် Katniss ...
IMDB: 7.5/10 571,535 votes
After Earth (2013) Will Smith နဲ့ သူ့သား Jaden Smith တို့တူတူတွဲရိုက်ထားတဲ့ဇာတ်လမ်းပါ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်တုန်းက လူသားတွေက ကမ္ဘာကြီးကိုစွန့်ခွာပြီး တစ်ခြားကမ္ဘာကို ပြောင်းသွားကြတယ်။ Will Smith တို့လက်ထက်မှာ Earth ကိုတောင် တော်ရုံ ဘယ်သူမှမသိတော့ဘူး၊ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ဂြိုလ်တစ်ခုအဖြစ်ပဲ သတ်မှတ်ထားတယ်။ သားအဖနှစ်ယောက်က အာကာသယာဉ်ပျက်ကျပြီး လူတွေစွန့်ခွာခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာပေါ်ကိုရောက်သွားတယ်။ ပျက်ကျတုန်းက ယာဉ်ပျံက နှစ်ပိုင်းပြတ်ထွက်သွားပြီး Will Smith တို့ပါတဲ့အပိုင်းက Emergency Beacon (အရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာ) ကပျက်စီးသွားပြီး Will Smith က ဒဏ်ရာ အကြီးအကျယ်ရသွားတယ်။ အဲ့ဒီမှာ သူသားကို သူတို့ယာဉ်ရဲ့ပြတ်ထွက်သွားတဲ့အပိုင်းက Emergency Beacon ကိုသွားယူခိုင်းရာက Jaden Smith ရဲ့ စွန့်စားခန်းစပါတယ်။ >ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးက Jaden ရဲ့ စွန့်စားခန်းတွေကိုပဲ အဓိက အသားပေးထားလို့ Jaden’s Adventure on After Earth ...
IMDB: 4.8/10 180,278 votes
Captain Phillips (2013) ၂၀၀၉ နှစ်တုန်းက ဆိုမာလီဓားမြတွေရဲ့ ပြန်ပေးဆွဲခြင်းခံရတဲ့အကြောင်းလေးကို ပြန်ရိုက်ထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇတ်ကားလေးပါ။ Richard Philips ဟာ ဇနီးနဲ့ သားနှစ်ယောက်ရှိပြီး သားနှစ်ယောက်စလုံး တက္ကသိုလ်တက်မယ့်အရွယ်ရောက်လို့နေပါပြီ။ Philips ဟာ အမေရိကန်အခြေစိုက်င်္ဘာလိုင်း Maersk လိုင်းရဲ့ Alabama သင်္ဘောမှာ ကပ္ပတိန်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူပါ။ သူတိုိ့သဘောင်္ဟာ Oman ကနေ Mombasa ကို ကုန်သေတ္တာတွေသယ်ပြီး သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သဘောင်္ဓားမြတိုက် ပြန်ပေးဆွဲမှုတွေ မကြာခဏဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ဆိုမာလီပင်လယ်ပြင်ဘက်ကနေ ဖြတ်သန်းသွားရဖို့ရှိတဲ့အတွက် Philips ဟာ သေချာဂရုစိုက်ပြီး လုံခြုံရေးအစရှိသည်တို့ကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ ပင်လယ်ဓားမြရန်ကို အမြဲတမ်းသတိထားနေတဲ့ Philips ဟာ မော်တော် ၂ စီး သူတို့သဘောင်္ဆီကို အရှိန်နဲ့ မောင်းလာတာတွေ့တော့ သူ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကို သတိပေးပြင်ဆင်ခိုင်းပြီး အကူအညီတွေရဖို့အတွက် ဖုန်းဆက်ပြီး ဆက်သွယ်နေပါတော့တယ်။ သင်္ဘော အရှိန်မြင့်မောင်းလိုက်တာကို နောက်ကလုိုက်လာတဲ့ မော်တော် ၂ စီးကို Philips က ပရိယာယ်ဆင်လိုက်တာကြောင့် မော်တော် ...
IMDB: 7.8/10 383,661 votes
Pacific Rim (2013) ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရဲ့အောက်ခြေကနေပြီးတစ်ခြားကမ္ဘာကနေဂြိုလ်သားမျိုးနွယ်စုတွေက ကမ္ဘာကိုဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ရာကနေပြီးဇတ်အိမ်တည်ထားပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်တဲ့သတ္တဝါတွေကို ကိုင်ဂျူလို့ခေါ်ကြတယ် ကိုင်ဂျူတွေကိုတန်ပြန်တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့အတွက်လူသားများဟာနိုင်ငံအသီးသီးစုပေါင်းပြီးတော့ရေဂါလို့ခေါ်တဲ့ စက်ရုပ်ကြီးများကိုဖန်တီးပြီးတော့တန်ပြန်ခုခံတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။အချိန်ကြာလာတဲ့အမျှကိုင်ဂျူတွေဟာ မိနစ်ပိုင်းလောက်သာခြားပြီးတစ်ကောင်ပြီးတစ်ကောင် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကနေထွက်လာပါတော့တယ်၊ ဒီတော့လူသားမျိုးတွေဘဲပျက်သုဉ်းသွားမလား ၊ ကိုင်ဂျူတွေကိုဘဲခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်မလားဆိုတာကိုဇတ်လမ်း ထဲမှာတစ်ဝကြီးကြည့်ရှုခံစားနိုင်ပါသည်။ Quality ကိုလည်း Blu-ray ကိုမှ 1080p နှင့် 720p ကိုထားပေးထားပါတယ်။ File Size : 2.09 GB Quality : Blu Ray 1080p 6CH Running Time : 2hr 11 minute Format : Mkv Genre : Action, Adventure, Sci-Fi
IMDB: 6.9/10 431,820 votes
Gravity (2013) Gravity အပြင်ဘက် ခုန်ထွက်!!! Gravity (2013) ---------------- "မတ်ရေ ရှင့်ရဲ့ အတောမသတ်နိုင်တဲ့ ပုံပြင်တွေကို ဒီအပတ်အတွင်း အတော်နားထောင်လိုက်ရတာမို့ ကျွန်မကို တစ်ခုပြန်ကူညီပါ။ ဆံပင်အညိုရောင်ရယ် ခပ်ပေပေ ခပ်တန်တန်းနေတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ရှင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ သူ့နာမည်က ဆာရာတဲ့။ မေမေက သူ့ရဲ့ ဖိနပ်အနီရောင်လေးကို ပြန်တွေ့ပြီလို့ သူ့ကိုရှင်တစ်ချက်လောက် ပြောပေးစမ်းပါ။ သူက ဒီဖိနပ်အတွက်သိပ်ကို စိတ်ပူနေတာ မတ်ရဲ့။ ဖိနပ်က သူ့ကုတင်အောက်မှာတင်ရှိတာကို။ ပြီးတော့ သူ့ကို ကျမကိုယ်စား အနမ်းလေးတစ်ပွင့်ပေးပေးစမ်းပါ။ နောက်ပြီး မေမေက သူ့ကိုသိပ်လွမ်းနေတယ်လို့လည်း ပြောလိုက်ပါအုန်း။ သူက မေမေ့ရဲ့ နတ်သမီးလေးပါလို့။ နောက်ပြီး ကျမက နောက်ဆုံးအချိန်ထိ အရှုံးမပေးဘူးဆိုလည်း သူမကို ပြောလိုက်ပါအုန်း။ မတ်ရေ မေမေက သူ့ကိုသိပ်ချစ်ပါတယ်ဆိုတာလည်း ပြောဖို့မမေ့နဲ့အုန်းနော်" _________________ SIMPLE !!! AWESOME !!! ဒီစကားလုံးနှစ်ခုကို စာကြောင်းတစ်ကြောင်းတည်းမှာ အရာဝတ္ထုတစ်ခုတည်းကို ညွန်းတဲ့မနေနဲ့ တွေ့ရခဲပါလိမ့်မယ်။ ရှုပ်မှ …… ပုံပြင်တွေအများကြီးရှိမှ…… ဇာတ်ကောင်တွေအများကြီးပါမှ Awesome လို့သုံးနေတဲ့အချိန်ကြီးမှာ ရိုးရှင်းလွန်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းနဲ့ ရုပ်ရှင်ဟာ ဘယ့်နှယ့် Awesome ဖြစ်မလဲပေါ့ …… Gravity ရုပ်ရှင်ဟာ တကယ့်ကို Simple and ...
IMDB: 7.7/10 697,494 votes
4K HDR 6CH
4K HDR 8CH
Blu-Ray 6CH Unrated
Burmese Subtitle © 2019 All rights reserved Disclaimer: This site does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.